अर्थतन्त्रमा डच रोगको जोखिम - Karobar National Economic Daily
अर्थतन्त्रमा डच रोगको जोखिम
query_builderJune 13, 2017 10:50 AM supervisor_accountगजेन्द्र बुढाथोकी visibility715
हालै मात्र चालू आर्थिक वर्षमा करिब ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने (आधारभूत मूल्यमा) केन्द्रीय तथ्यांक विभागको र उत्पादकको मूल्यमा साढे ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपणपछि पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहित सरकारका उच्च अधिकारीहरूले उत्सव नै मनाए ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रको विस्तार नभईकन यथार्थमा अर्थतन्त्रको आकारमात्र विस्तार भयो भनेर खुसी भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्र मानिने औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार होइन, अझ खुम्चिएको अवस्था छ ।
विगत केही वर्षयताको अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति अध्ययन गर्ने हो भने जुन ढंगले हाम्रो अर्थतन्त्रमा बाह्य निर्भरता बढ्दै गएको छ, त्यसले सकारात्मक संकेत गर्दैन । सरकारको बजेटको आकार बेपत्तै बढेको छ, देशको आन्तरिक स्रोतले सरकारको चालू खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता निकै कमजोर छ ।
बाह्य सहयोग पाइहालिन्छ नि भन्ने आशाकै भरमा पुँजीगत खर्च बढाएजस्तो देखिए पनि यथार्थमा विकासतर्फ जाने बजेट बढेकै छैन । असारे बजेट रोपाइँ गरेर अन्तिम महिनामा खर्च भएजस्तो देखिए पनि सरकारी खर्चले अर्थतन्त्रमा उत्पादकत्व सिर्जना गर्नै सकेको छैन ।
हाम्रो अर्थतन्त्रको सबलता र दुर्बलता के हो भन्ने विषयमा राज्यका आर्थिक थिंकट्यांकहरूले कुनै अध्ययन गरेका छैनन् । अन्धाधुन्ध मध्यम आय÷विकसित देश, ५ हजार र १० हजार अमेरिकी डलरको प्रतिव्यक्ति आयको आधारहीन गफ छाँट्ने गरिएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान द्वैधताको धरातलमा हेर्दा आउँदो १५ वर्षमा आमनेपालीको प्रतिव्यक्ति आय अहिलेको ८ सय ५० डलरबाट बढेर २ हजार डलरसम्म पुग्यो भन्ने धन्न मान्नुपर्छ ।
तर, राष्ट्रिय आय बढाउने स्रोत के हो त ? अर्थतन्त्रका कुन–कुन क्षेत्रको विस्तार गरियो भने त्यसले राष्ट्रिय आय विस्तार गराउँछ ? अझ, प्रतिव्यक्ति आय बढाउनका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा के–कस्तो स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा भने कमै बहस हुने गरेको छ ।
अहिले राष्ट्रिय आय बढाउने एकै मात्र स्रोत देखिने–देखाइने गरिएको छ, बिदेसिएका कामदारहरूले घर पठाउने वार्षिक साढे ८ खर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स (औपचारिक र अनौपचारिक दुवै स्रोतबाट) ।
पछिल्लो एक दशकमा रेमिट्यान्सबाटै ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रवाहित भएको पंक्तिकारको एक अध्ययनबाट देखिएको छ, जसमध्ये ४१ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक अर्थात् बैंकिङ प्रणालीबाट भित्रिएको हो । विश्व बैंकको माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स विभागले नेपालजस्ता विकासशील देशमा ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको उल्लेख गरेको छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले भने यहाँ १० प्रतिशतमात्र रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको दाबी गरेको छ ।
मध्यमार्गी रूपमा औसतमा २० देखि २५ प्रतिशत रकम अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने गरेको सबै आर्थिक क्षेत्रका अध्येताहरू स्वीकार गर्छन् ।
अर्को तथ्यांक हेरौं, नेपालको अर्थतन्त्रको मूल आधार अझै पनि कृषिक्षेत्र रहँदै आए पनि आर्थिक प्रणालीमा यसको योगदान निरन्तर घट्दो क्रममा छ । अहिले कृषिले कुल अर्थतन्त्रको २८ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगट्छ ।
अर्कातिर औद्योगिक क्षेत्रको योगदान साढे ५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । जब आन्तरिक उत्पादन आधार कमजोर हुन्छ, त्यसपछि बाह्य निर्भरता चुलिएर जान्छ ।गत वर्षको भारतीय नाकाबन्दीका क्रममा जतिसुकै ठूल्ठूला स्वरमा आत्मनिर्भरताका गुड्डी हाँके पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुनै पनि ठोस नीति, योजना र कार्यक्रम नै कसैले पनि अगाडि बढाउन सकेनन् ।
सत्य कुरा तीतो हुन्छ, हामी नेपालीहरूको कस्तो बानी छ भने चोट लागेका बेला निकै छट्पटाउँछौं, अलिकता घाउ खाटा बस्नेबित्तिकै सबै कुरा बिर्सिहाल्छौं । बाध्यता वा परिबन्दका कुरालाई छाड्ने हो भने आमनेपालीमा भाते बानी, अल्छे र विलासी संस्कार बढ्दै गएको छ । यसका उदाहरण हेरौं, ७० को दशकतिर विश्वभरि धान–चामल निर्यात गर्ने नेपाल अहिले वर्षमा ३९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको त अन्नै किन्छ, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामै २९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको अन्न आयात भइसकेको छ ।
खेतीपाती, उद्योगधन्धा सबै छाडेर कम परिश्रम पर्ने सेवामूलक क्षेत्रमा संलग्नता बढ्दो छ, अनि यसको प्रतिफलस्वरूप हरेक वर्ष आयातको बिल अत्यधिक रूपमा उकालो लाग्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षभरिमा ७ खर्ब ७३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भएकोमा चालू वर्षको १० महिनामा नै ८ खर्ब ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँबराबरको आयात भइसकेको छ ।
जबकि निर्यातको अनुपात हेर्ने हो भने ६१ अर्ब रुपैयाँबराबरीको मात्र देखिन्छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा यो वर्षमा करिब ८ खर्ब ७०–७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको आयात हुँदा निर्यात ७०–७५ अर्बमा मात्र सीमित हुने अवस्था छ । जब निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा व्यापारघाटा चुलिँदै जान्छ । चालू आर्थिक वर्षमा करिब ८ खर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापारघाटा हुने अनुमान छ ।
अब, बाह्य व्यापारको बिल तिर्नका लागि स्रोतको जोहो हेरौं । आव ०७१/७२ मा वस्तु निर्यातबाट ९८ अर्ब २७ रुपैयाँ, ०७२/७३ मा ७४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ आर्जन भएकोमा पर्यटन (भ्रमण आय) बाट क्रमशः ५३ अर्ब ४२ करोड र ४१ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ आर्जन भएको देखिन्छ । बिदेसिएका कामदारहरूबाट प्राप्त रेमिट्यान्स भने उक्त दुवै आर्थिक वर्षमा क्रमशः ६ खर्र्ब १७ अर्ब र ६ खर्ब ६५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । यी तीनै स्रोतबाट आर्जन भएको विदेशी मुद्रा आयातका लागि भुक्तानीसहितका प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छ ।
यसरी हेर्दा नेपालको विदेशी मुद्राको आर्जन रेमिट्यान्सको एकल स्रोतमा निर्भर भएको देखिन्छ, यो अर्थतन्त्रका लागि अति नै संवेदनशील र जोखिमयुक्त पक्ष हो । अर्थशास्त्रीहरूले यसरी विदेशी मुद्राको आर्जनमा कुनै एक स्रोतमा निर्भरता बढ्नुलाई डच डिजिजको संज्ञा दिने गरेका छन् ।
एकल स्रोतको निर्भरताले भोलि त्यो स्रोतमा आउन सक्ने उतार–चढावको झट्का (सक्स) अर्थतन्त्रले धान्न मुस्किल हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । अहिले धमाधम भित्रिइरहेको रेमिट्यान्सले नेपालको व्यापारघाटाको बिल तिर्न सहयोग पुगिरहेको भनेर हाम्रा नीतिनिर्माता, प्रशासक तथा आर्थिक क्षेत्रका जिम्मेवार अधिकारीहरू आनन्दले निदाइरहेको देखिन्छ । नेताहरू त नेतै भइगए, कुर्सीका खेलबाहेक कुनै दलका नेतालाई अर्थतन्त्रप्रति जिम्मेवारी बोध हुने कुरै आएन ।
उदाहरणका लागि, रेमिट्यान्सबाट आव ०७१/७२ मा ६ खर्र्ब १७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ आय हुँदा उक्त वर्ष व्यापारघाटा ६ खर्ब ८९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो, आयात बिल तिर्नका लागि निर्यात र पर्यटन आयबाट आर्जित रकम थपथाप गर्नुप¥यो ।
यसैगरी आव ०७२÷७३ मा रेमिट्यान्सबाट ६ खर्ब ६५ अर्ब ५ करोड आय हुँदा व्यापारघाटा ७ खर्ब ३ अर्ब ४८ करोड पुग्यो भने चालू आवको पहिलो १० महिनामा रेमिट्यान्स आय ५ खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (५ अर्ब ३१ करोड डलर) मा खुम्चिँदा कुल वस्तु व्यापारघाटा ३७.५ प्रतिशतले बढी रु. ७ खर्ब ४७ अर्ब ६५ करोड (६ अर्ब ८४ करोड डलर) पुगेको छ ।
रेमिट्यान्स आयमाथिको यो एकल निर्भरताले आउँदा समयमा नेपालले ठूलै समस्या भोग्नुपर्ने जोखिम बढ्दो छ । हाम्रो प्राकृतिक स्रोतसाधनको निर्यात छँदै छैन भने पनि हुन्छ । देशको निर्यात व्यापार सीमित वस्तु र सेवामा अड्किएको छ । पर्यटन आयको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका पर्यटकहरूको प्रतिव्यक्ति खर्च र बसाइ दर निकै कम छ । सन् २०१६ को आँकडा हेर्ने हो भने पर्यटकहरूको बसाइ अवधि औसत १३.४ दिन र प्रतिपर्यटक प्रतिदिन खर्च ५३ अमेरिकी डलरमात्रै थियो ।
हाल कतारमाथि खाडी क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूले लगाएको नाकाबन्दीको असर आउने दिनमा नेपालको रेमिट्यान्स आयमा पर्ने निश्चित छ, किनकि कतार नेपालको रेमिट्यान्सका मुख्य स्रोतमध्येको एक हो । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१५ मा नेपालका रेमिट्यान्सका मुख्य १० स्रोत मुलुकमध्ये कतार पहिलो नम्बरमा थियो ।
कतारमा हाल कार्यरत करिब ७ लाख नेपालीले वार्षिक २ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको रेमिट्यान्स नेपाल पठाउने गरेका छन् (स्रोत ः विश्व बैंक, माइग्रेसन एन्ड रेमिट्यान्स रिपोर्ट–२०१६) । यो स्रोतमा समस्या आउनेबित्तिकै नेपालको रेमिट्यान्स प्रवाहमा संकट आउने निश्चित छ ।
अर्थतन्त्र विश्व बैंक केन्द्रीय तथ्यांक विभाग